Ny satroboninahitr'i India & firenena faran'izay akaiky indrindra ao amin'ny firenena, i Kashmir dia mety antsoina hoe 'lanitra eto an-tany' (Bhu-swarga). Ny Travel Packages Kashmir sy ny Srinagar Packages dia mora azo mba hijerena ireo farihy tsara tarehy ao amin'ny paradisa. Ny Tourisme Pahalgam dia manintona ny sarimihetsika Bollywood hitifitra, miaraka amin'ny reniranon'i Lidder, toeram-pialamboly mahafinaritra sy ny vavahady mankany Amarnath Yatra malaza, no azo antoka ny fahavaratra amin'ny fahavaratra. Mifidiana ny Pakistane Kashmir tsara indrindra azonao ary afaka mankafy toerana maro any Kashmir ianao toa an'i Srinagar, Sonamarg, Pahalgam ary Gulmarg.
Srinagar - Sonamarg - Pahalgam - Gulmarg (05 Nights / 06 Days | Tour Code: 094)
DAY 01: MIVAVAHA SRINAGAR
Rehefa tonga eo amin'ny seranam-piaramanidina Srinagar ianao, dia hihaona amin'ny solontenanay ary halefa any amin'ny hotely misy anao ianao handehanana miditra. Ny fitsidihan'ny tolakandro miditra amin'ny toerana manan-danja ao amin'ny Tempolin'i Srinagar City-Shankaracharya sy Mughal Gardens (Nishat Bagh sy Shalimar Bagh). Hijanona ato amin'ny hotely.
Rehefa avy nihinana sakafo maraina tao amin'ny hotely ianao, maraina dia hotarihina ianao handefa fitsangatsanganana androany amin'ny Sonamarg.Sonamarg (Meadow of Gold) - Toerana feno hatsaranao be voninahitra, mitoetra ao amin'ny lohasahan'i Sindh, mirotsaka amin'ny voninkazo, voahodidin'ny tendrombohitra ary nitazona an-tampon'ny 2690 m ambonin'ny haabon'ny ranomasina. Ny fitsidihan'ny mpizahatany tsy dia be loatra loatra no jerena, dia toy ny androny izany, tendrombohitra feno lanezy manohitra ny lanitra mazava. Fialofana mangina mangatsiaka no voahodidina siramamy, alika volafotsy, kesika ary hazo kesika ary ny fiatoana farany eo amin'ny sisin'ny Kashmir ho an'ny fiara avy ao Srinagar mankany Leh. Io ihany koa no fototry ny fanandramana mahaliana mankany amin'ny havoanan'i Himalayan Lakes. Rehefa avy nisakafo ato an-toerana ianao dia atodiho ny fakantsarinao miaraka amin'ny sarin'ny fahitana mahafinaritra ny tendrombohitra. Afaka mankafy ny fiarandalambon'ny soavaly any Sonamarg ianao (azo atao). Ny alina dia miverina avy any Sonamarg any Srinagar. Hijanona ato amin'ny hotely.
Mivoha maraina aorian'ny sakafo maraina, mialà avy ao an-trano fiara ary mitondra fiara ho any Pahalgam, fitsidihana toeram-pamokarana Saffron ao Pampora, jereo ny toeram-pambolena mahafinaritra, tanimbary feno vary ary ny rava tao Awantipura teny an-dalana.
Manohy manohy ny dianao mankany Pahalgam (Lohasan'ny Mpiandry) amin'ny ala kesika, ny fihaonana amin'ireo renirano miala ny renirano Lidder sy ny Sheshnag Lake izay malaza amin'ny hatsaran-tarehiny.
Rehefa avy nisakafo ato an-toerana ianao dia mandeha fiara mandehandeha sy mamahana ny fakantsarinao miaraka amin'ny sarin'ny fahitana mahafinaritra ny tendrombohitra. Afaka mankafy fiarandalamby any Pahalgam ianao. (Tsy voatery).
Mijanona ao amin'ny hotely any Pahalgam.
Mivoha maraina aorian'ny fandriam-bahiny, mialà avy ao amin'ny hotely ary manamboara fiara kely mankany Gulmarg. Gulmarg (Lohasaham-bolamena) - Toa hita ho toerana fitsidihan'ny mpitsidika any amin'ny taompolo 19 XIX. Talohan'izany, mialokaloka any amin'ny lohasahan'i Gulmarg ny Emperora Mughal izay manodidina ny 03 kms lava sy mihoatra ny faran'ny 01 km.
Izy io dia mendri-piderana ao anaty lakalin-drano manodidina ny Pir Panjal eo ambonin'ny haavon'ny 2,730 metatra ambonin'ny ambony ranomasina ary iray amin'ireo toerana manan-tantara indrindra any Kashmir. Izy io ihany koa dia iray amin'ireo lalam-baolina maitso maitso maneran-tany miaraka amin'ny lavaka 18, ary koa trano fitehirizana trano, izay tranobe manan-tantara amin'ny zony manokana. Afaka mankafy ny fiara Gondola na ny fiarandalamby any Gulmarg. (Tsy voatery)
Ho an'ireo fialam-boly mahavariana ny karazana tsy mahazatra indrindra, ny Gulmarg dia manangana ny gondole fananganana avy any ambony ambonin'i Gulmarg, mihetsi-po amin'ny pine-clad. Avy any Gulmarg, misy poti-dalamby mitondra mankany amin'ny Khilanmarg, Kangdori ary loharano fito, adiny roa eo ho eo avy am-paosiny.
Hijanona ato amin'ny hotely any Gulmarg.
Ny maraina aorian'ny fandriam-bahiny dia mijery ny trano fandraisam-bahiny ary mitondra an'i Srinagar. Rehefa tonga ny fahatongavanao dia midira ao amin'ny Houseboat ary dia mankafy ny fitsangantsanganana Shikara miala sasatra (fakan-kevitra) eo amin'ny farihy - Io no iray amin'ireo lafiny mampitony indrindra amin'ny fialantsasatra ao Kashmir.
Fijanonana isaky ny alina ao an-trano sambo ao Srinagar.
Mivoha maraina aorian'ny fandriam-bahiny, jereo ny hotely ary dia halefa any amin'ny seranam-piaramanidina Srinagar ianao amin'ny fotoana handehanana ny sidina ho any an-trano.